‘कम्युनिष्ट सरकारले धर्मपनि बेच्यो, संस्कृति पनि बेच्यो अब मुलुक पनि बेच्न बेर छैन’ | Makalukhabar.com
मोरङ क्षेत्र नम्वर ६ ‘ख’ का प्रदेश सभा सांसद केदार कार्की प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस एक नम्बर प्रदेशका प्रमुख सचेतक समेत हुन् । प्रखर वक्ताको रुपमा परिचित केदार कार्की युवाहरु माझ लोकप्रिय पनि छन् । कार्कीसँग समसामयिक राजनीतिका सन्दर्भमा विवेक मिश्रले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको पनि २ वर्ष बितिसकेको छ यस विचमा के कस्ता काम र समस्याहरुको समाधान गर्न सफल हुनुभयो ?
यो समय भित्रमा सबभन्दा ठूलो जोड मैले शिक्षामा दिएको छु । त्यस सँगसँगै सामाजीक विकासलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको छु । सबभन्दा विकसित मेरै क्षेत्र पर्छ किनभने, मेरो क्षेत्र बिराटनगर महानगर भित्र पर्छ । तर, पनि यो क्षेत्र प्रदेश भित्रको सबभन्दा अविकसित क्षेत्र हो जस्तो लाग्छ । यहाँ अत्याधिक सुकुम्बासीहरु हुनुहुन्छ, ग्राभेल सम्म नभएका बाटोहरु अझै छन् । दयनिय अवस्थाका विद्यालयहरु छन् । यहाँ अत्यन्तै धनी मानीसहरु पनि छन् । सबैभन्दा धेरै उद्योगी व्यवसायीहरु भएको क्षेत्रपनि मेरै क्षेत्र हो । यहाँका विद्यालयहरु विद्यालय नभएर जेल जस्तै बनेका छन् । विद्यालय भित्र खेल्ले ठाँउ छैन, छडि लिएर पढाउने संस्कार अझै छ । यी समस्या हटाउनको लागी यस क्षेत्रका सबै विद्यालयमा खेलकुद सामग्रीहरु पुर्याएका छौं साथै, अगे्रंजी माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गर्न सबै सहमत भएका छौं ।
महानगरपालीका क्षेत्र भित्रै रहेर पनि आफ्नो क्षेत्र अबिकसित छ भन्दा महानगरपालीकाले चैं कस्तो भुमिका खेलीरहेको छ ?
महानगरपालीका हो, तरपनि यो क्षेत्र सुरुदेखी नै अव्यवस्थीत बसोवास भएको, बाटो ग्रावेल समेत नभएको क्षेत्र हो । बिराटनगरमा गाभिएका छेउछाउका गाँउहरुको पुराना बस्तीहरुमा समेत अहिले ग्राभेल छैन । महानगरपालीकाले बजार र बजारको छेउ सम्मलाई मात्रै बिकासको रुपमा हेर्यो । महानगर पुरैलाई हेरेन । अहिले हामी जनप्रतिनिधीहरु भईसकेपछि यसलाई झक्झकाउदै सुधार गर्ने क्रममा छौं । अहिले जनप्रतिधिनीहरु भएपश्चातको नगरपालीकाले सकारात्मकै भुमिका खेलीरहेको छ ।
तपाँई सांसद मात्र नभएर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ, प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षसँग कत्तिको समन्वयकारी भुमिका खेलिरहेको छ ?
प्रदेश सरकारले प्रतिपक्ष सँग लुकामारीको भुमिका खेलीरहेको छ । किनभने प्रदेश सरकार झुक्याउने आस्वासन दिने, चिट गर्ने गरेको छ । जसरी केन्द्रिय सरकार चिट गर्छ त्यसरीनै प्रदेश सरकार पनि त्यसकै सिको गर्दै चिट गर्ने मात्रै गर्छ । प्रदेश सरकार आफैंले काम गर्न जानेको छैन, के काम गर्दा हुन्छ भन्ने पनि ज्ञान छैन । प्रदेश सरकार खिलाराज रेग्मीको चुनावी सरकार जस्तै भएको छ । बजेट बिनियोजन गर्दा, काम गराई हेर्दा यो सरकार चुनाबी सरकार जस्तै देखियो ।
उसले कार्यकर्ता भित्रबाट पनि गुटका मान्छेलाई मात्र व्यवस्थित गर्दै जाँदै छ । प्रदेश सरकारको प्रतिपक्ष सँग त परै जाओस् पार्टिका मन नमिल्ने मान्छेहरु संगत समेत राखेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्ष सँग सुमधुर सम्बन्ध राख्छ भन्ने परिकल्पना गर्नु त हामीले आश गर्नु मात्रै हुन्छ ।
प्रतिपक्षले पनि भूमिका खेल्न नसकिरहेको भन्छन् नि ?
यो चैं हेर्ने आँखा हो । प्रतिपक्षले भुमिका राम्रो नखेलेको देख्नुहुन्छ किनभने उहाँहरुले सभामुखलाई जूत्ता हान्नु भो । हामीले हानेका छैनौं । उहाँहरुले बजेट भाषण गर्न जाँदै गरेको अर्थमन्त्रीको ब्रिफ्रकेस खोस्नु भो, हामीले खोसेका छैनौं । उहाँहरुले संसद भवनको सबै टेवल कुर्सिहरु फोर्नु भो, हामीले त्यसो गरेनौं । हामिले रचनात्मक भुमिका मार्फत रोष्टममा गएर जनताको चासोका विषयहरु र सरकारले गरेका गैर न्यायिक, गैर संवैधानीक कदमहरुको बिरोध गरेका छौं । शान्तिपुर्ण तवरले रोष्टम घेरेका छौँ, नारावाजी पनि गरेका छौं । अब त्यसलाई भुमिका नभनेर के भन्ने ?
केहिदिन अघिमात्रै सरकारले प्रदेश प्रमुख हरुलाई हटाएर नयाँ प्रदेश प्रमुखलाई नियुक्ति गरेको छ, यो घटनालाई ठान्नु हुन्छ ?
यो घटनालाई स्वभाविकै लिने कुरै छैन । सरकारले आफ्नो अधिकार भित्र हो भनेर भन्न सक्छ तर, यसलाई स्वभाविकै रुपले कसरी लिने ? उहाँहरुले त कार्यकर्ता राख्नुभयो । टिकटको लागी सिफारीस गरेकोले टिकट नपाएपछि भाग लगाएर प्रदेश प्रमुख बनाएर पठाइएको हो । यो निर्णय उहाँहरुको हतास मानसिकतामा भएको हो । भोली अर्को सरकार आयोभने त्यसलेपनि तुरुन्तै हटाईदिने भयो । प्रदेश प्रमुखहरुले सरकारले गरेको निर्णयमा अवरोध गरेको भए हटाउनु स्वभाविक हुन सक्थ्यो यहाँ त प्रदेश प्रमुखहरु पनि सरकारकै जस्तो भई सक्नुभएको थियो ।
सरकारले ल्याएको एउटापनि बिधेयक फर्काउनु भएको थिएन, सरकारकै सबै काम गरीराख्नु भएको थियो । उहाँहरुलाई के लाग्यो भने सबै काम गरेपनि हाम्रो पार्टीको मान्छेले भत्ता खान पाएन भनेर उनीहरुलाई हटाएर आफ्ना ल्याएका मात्र हुन् ।
कांग्रेसको सरकारका पालामा उहाँहरुलाई पनि नाम मागेको हो । उहाँहरुकै प्रदेश सरकारलाई सपथ ग्रहण गराउनको लागी प्रदेश प्रमुख अनिवार्य चाहिने भएकोले त्यसबेला सरकारले प्रदेश प्रमुख गठन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था थियो । अहिले आएर प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्दा उहाँहरुकै दरिद्र मानसिकता देखियो ।
नजिकिँदै गरेको पर्यटन वर्ष सफल बनाउन प्रदेश सरकारले कस्तो योजना ल्याईरहेको छ ?
औपचारीक रुपमा कस्तो योजना ल्याउदै छ त्यो मलाई थाहा भएन । सरकार एकदमै एकलौटी रुपमा हिँडि रहेको छ । पर्यटनमा वर्षमा पर्यटकलाई दुःख दिईन्छ, पर्यटकले हेर्ने चिजजति सबै नासिई सक्यो । आधुनिकीकरण हेर्न त सिंगापुर, थाईल्याण्ड गई हाल्छन् नी पर्यटक किन काठमाडौं आउने ? काठमाडौंको जुन नेचर थियो, जुन बनोट थियो, संस्कृति थियो, जुन परम्परा थियो त्यो आज छ ? हिजोका संस्कार संस्कृति सबै मासेर शासन गर्नेहरुले रजाई गर्ने अनि त्यहाँ को टुरिष्ट आउने ? यहाँ पनि इण्डियन पर्यटक आएभने यहाँ चार ठाँउ पुलिसले रोक्छन् र पछाडिबाट पैसा माग्छन् । छिमेकि मुलुक बाटै आउने पर्यटकहरुलाई पनि दुःख दिने व्यवहार भएपछि कसरी पर्यटक आउँछन् ?
पर्यटन वर्ष मनाउने भन्ने करोडौं रुपैया बजेट छुट्याउने, कार्यकर्ताहरुलाई समिति बनाएर पोस्ने भन्दा बाहेक पर्यटकलाई आकर्षित गर्नेखाल्को र पर्यटकलाई सुरक्षित हुनहुन्छ भन्ने योजना न तपाँइको मिडियाले देखेको छ, न मैले देखेको छु, न जनताले देखेका छन् । केवल सरकारले मात्र देखेको छ ।
भारतको नयाँ नक्सामा नेपालको केहि भूभाग परेको छ नी त्यस बिषयमा के भन्नुहुन्छ ?
यहि सिमाको कारणले २०१७ सालमा वीपी कोइराला जेल गएका थिए । त्यसबेला हिमालको बारेमा बिवाद थियो र वीपीले भारतको संसदमा गएर जवाहरलाल नेहरुलाई माफी मगाए । चीनमा गएर माओत्सेतुङ लाई हिमाल नेपालको हो भन्न लगाए । त्यतिखेर नै चीन र भारतसँग सिमा निर्धारण भयो । लिपुलेकको बारेमा भारतसँग पनि सिमाको कुरा हुँदैथ्यो र त्यतिखेर जवाहरलाल नेहरुसँग मिलेर राजा महेन्द्रले नेहरुलाई कालापानी दिएर पञ्चायत शासन लागु गरेका थिए ।
इतिहास पढ्नुस, नेपाली कांग्रेसले त्यतिबेला सरकार गुमाएको यहि सिमाको कारणले हो । राजा महेन्द्रले २०२८ सालमा कालापानीमा भारतलाई सेना राख्न दिएको हो । कालापानीमा मार्चपास गर्नजाने साथीहरु अहिले क्याविनेटमा हुनुहुन्छ अनि कालापानी माथि लिपुलेकमा चीन र भारतले सम्झौता गर्दा त कम्युनिष्टकै सरकार थियो नि । त्यतिमात्र हैन अस्ति चिनीयाँ राष्ट्रपति आउँदा लिपुलेकमा चीन र भारतले गरेको सम्झौता सच्याईयोस् भनेर माग गर्यो सरकारले ?
अहिलेको सरकारले धर्मपनि बेच्यो, संस्कृति पनि बेच्यो मलाई लाग्छ यो मुलुक पनि कहाँ कताबाट सम्झौता गरेर बेच्छ टुंगो छैन । त्यसकारण लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता जतिपनि सिमा विवादहरु छन् समाधान गर्नुपर्छ त्यो भूःभाग हाम्रै हो । यसमा कुटनीतिक रुपले चीनसँग पनि हामीले कुरा गर्नुपर्छ । लिपुलेक नेपालको हो भन्ने बिषयमा दुईमत छैन ।